UMNYANGO WEGARAJI KWIGUMBI LOKUHLALA (IINDIDI ZOYILO KUNYE NEMIBONO) - IINGCAMANGO ZEGUMBI LOKUPHILA
Eyona Iingcamango Zegumbi Lokuphila Umnyango wegaraji kwigumbi lokuhlala (iindidi zoyilo kunye nemibono)
Apha sabelana ngomnyango wegaraji kuyilo lwegumbi lokuhlala kwaye sixoxa ngeendlela ezahlukeneyo kubandakanya iingcango zeglasi, phezulu nangaphezulu, amacandelo kunye nezitayile zekhenophi. Iingcango zegaraji ezizenzekelayo ziyinto emangalisayo. Banomsebenzi onzima, banokuvula okukhulu kakhulu, kwaye okugqwesileyo, ziqhutywa ziimoto ukuze kungabikho mfuneko yokuba wenze umzamo omkhulu wokuyivula. Kodwa ngaba ukhe wacinga okanye ucinga ukusebenzisa iteknoloji yomnyango wegaraji, kwaye uyisebenzise njengomnyango wegumbi lakho lokuhlala? Ukuvulwa okukhulu kwenza ukuba kube lukhetho olukhulu ukudibanisa igumbi lakho lokuhlala ngaphandle, likuvumela ukuba udibanise ngokulula izithuba ezibini ngobunzima obuncinci xa kuthelekiswa neminyango eshukumayo kunye neengcango ezi-bi.
Ukuba ucinga ngendlela ejongeka ngayo, ungakhathazeki! Ngaphandle komnyango wegaraji yentsimbi oqhelekileyo, kukho ezinye iindlela zokukhetha umnyango weglasi. Zijongeka njengefestile yakho yesiqhelo yeefestile zangoku ezivela ngaphandle, iyenza ukuba ibe lukhetho oluhle kakhulu.
Igumbi lokuhlala Iindleko zeMinyango yeGaraji
Iglasi yeGaraji yeGlasi kwigumbi lokuhlala
Umnyango weGaraji kwiiYilo zeNdawo yokuPhila
Isilayidi esiya emnyango weGaraji kwigumbi lokuhlala
Icandelo leGaraji leGaraji kwigumbi lokuhlala
Iingcango zegaraji zeglasi zihlala zivela kwi- $ 1500 ukuya kwi-5500 yeedola ngokobungakanani obuqhelekileyo, ngelixa ubukhulu obude, amasiko kunye neenketho zomthi zinokuya ngaphezulu kwe- $ 8000.
Ngaphambi kokuthenga qiniseka ukuba ukhetha ubungakanani obugqibeleleyo kwindawo yesicelo, ukujonga kabini umthwalo womthwalo wakho / isilingi, kunye neemfuno zombane ngokunjalo.
Ibhontshisi ye-I ebaleka eluphahleni iyi-anchor yenkxaso yokuhombisa ucango lwegaraji yeglasi. Umnyango wegaraji emnyama-ogqityiweyo ugcwalisa iinkcukacha ezimnyama zommandla ohlala kuwo, ngelixa iithoni ze-beige kunye neenkuni zendalo zizalisa kakuhle imibala yendalo evarandeni. Kuba ucango lwegaraji lunokuvula okukhulu kakhulu, ikhabinethi ibekwe ngobuchule kude nokuvula. Umabonwakude ubekwe kwi-niche yokhuseleko olongezelelekileyo.
Zininzi iindlela ezahlukeneyo zomnyango wegaraji ezisebenza kwiminyango yegaraji yeglasi enje:
Icandelo-olu khetho luneepaneli ezinamacandelo aneehenjisi ngokuthe tye ezivumela ukuba zityibilike kumkhondo oxhuma kwisilingi. Ezi zihlala zihamba ngemoto kwaye yenye yeendlela zokonga indawo.
Phezulu nangaphezulu - ucango lusagcwele ngentla kwentloko kwingoma kule ndlela, kodwa amacandelo omnyango awasadingi zihenjisi, ngenxa yoko wonke umnyango oqinileyo uphakanyiswe ngentla kwentloko. Ezi zihlala zihamba ngemoto kwaye zifuna ukucocwa ngaphandle, njengoko kufuneka uyikhuphe kancinci ngaphambi kokuvula.
I-Canopy-oku kuyafana kakhulu ukuya phezulu nangaphezulu, umahluko ophambili yinxalenye yomnyango ishiywe ngaphandle, yenza ikhenophi encinci.
Zisa umoya ovulekileyo onokuvula kuphela ngeengcango zegaraji zeglasi. Eli gumbi lokuhlala lidityaniswa kwisiqwenga sefenitshala yomthi we-teak, esenza ukuba kugqitywe ngaphakathi nangaphandle. Eli gumbi lokuhlala liqhagamshela kwivaranda engaphambili, kodwa isihlalo esiqinileyo kunye noyilo olucacileyo lomnyango wegaraji lwenza ukuba lubonakale njengefestile yeglasi eqhelekileyo evela ngaphandle.
Xa uvaliwe, lo mnyango wegaraji emhlophe uvalwe ngokuqinileyo utywina ngaphandle ukuze ungabinangxaki nezinambuzane ezivuzayo. Unokutshixa kwakhona ukuba ungaphakathi ngaphakathi kukhuseleko olongezelelekileyo.
Nalu umnyango wegaraji kuyilo lwegumbi lokuhlala kwisalathiso sakho:
igumbi lokuhlambela elikhanyayo
Njani ngokudibanisa iindawo zakho zokuzonwabisa? Qhagamshela indawo yakho yokutyela ngaphandle evarandeni kwigumbi lokuhlala ngokulula ngomnyango wegaraji. Eli gumbi lokuhlala linoseto olulula kakhulu lwesofa, ikhabhathi yolonwabo, iTV kunye nezinto ezimbalwa. Olona phawu lubalulekileyo luya kuba ngumgangatho wokhuni oluqinileyo kunye neepaneli zesilingi. Ngokudityaniswa komnyango wegaraji emnyama yeglasi, inika imbonakalo yanamhlanje yemizi mveliso ehambelana neziqwenga zefanitshala.
Ngaphandle kweglasi ecacileyo, ngokuqinisekileyo ungasebenzisa iglasi enqabileyo kumnyango wegaraji ngokunjalo. Umdibaniso omhlophe, oluhlaza okwesibhakabhaka kunye nomhlophe unika eli gumbi lokuhlala i-nautical vibe eyinika imvakalelo yokuhlaziya. Inkqubo ye- uluvo lomnyango wegaraji Isetyenziswe apha ine-chrome egqityiweyo, ukuyinika inkangeleko yanamhlanje ehambelana nokubukeka kwegumbi lokuhlala.
Esi sisilayidi esikhethekileyo sokwenza ucango lwegaraji esibandakanya indlela ye-hydraulic yokuvula nokuvala ngokukhuselekileyo. Umnyango wegaraji ngokusisiseko utyibilika ngokuthe nkqo, endaweni yokuya kwindlela ethe tyaba, uvumela indawo ecacileyo ngaphezulu. Oku kusebenza kuphela ukuba unesilingi esiphakamileyo esinokuhlalisa olu hlobo lomnyango wegaraji. Kweli gumbi lokuhlala lanamhlanje lezemizi-mveliso, ukugqitywa kwentsimbi yentsimbi yomnyango yinto efanelekileyo yokuncedisa ngaphakathi.
Thatha ukukhanya kwelanga ngomnyango wegaraji yeglasi evaliweyo evulela ibhalkhoni encinci. Ungenisa umoya omtsha kunye nokukhanya kwelanga kwigumbi lakho, ukuphucula ukujikeleza komoya ngaphakathi. Ukugqitywa kwemizi-mveliso yaphantsi kunye nodonga lwezitena kufana nokubonakala kwesakhelo esimnyama kunye nokudityaniswa kweglasi yobhedu kusetyenziswa kumnyango wegaraji.
Lo mnyango mncinci wegaraji ubungakanani nje obufanelekileyo bale ndawo incinci yokuhlala. Umnyango ogqityiweyo omnyama ugcwalisa ngokufanelekileyo iziqwenga zefanitshala zala maxesha, kwaye uzimele kakuhle iindonga ezimhlophe.
into endala into entsha intsingiselo
Ukuba ufuna iveranda, kodwa awufuni kukhathazeka ukugubungela ifanitshala yakho yangaphandle ngalo lonke ixesha kunetha, okanye ufumana ulondolozo lwefanitshala yangaphandle uxanduva, cinga ukuyingenisa ngaphakathi emnyango wegaraji. Lo mzekelo unokuseta kwale patio yanamhlanje kwindawo encinci egutyungelweyo ngaphakathi kwaye yahlulwe kuphela kwiyadi yangasemva ngomnyango wegaraji. Uyakwazi ukufumana lula impepho engaphandle kwaye ujonge ngaphandle kokukhathazeka malunga nemithambo yangaphandle emanzi kunye nemiqamelo.
Ukufumana ezinye izimvo ezinxulumene noko jonga kwinqaku lethu malunga Isoftware yoyilo lwegaraji Ukucwangcisela nokwenza ezakho izakhelo zegaraji.
Iingubo zokuprinta zeentyatyambo zemitshato
unganxiba ezimhlophe emtshatweni
tshintsha igama kwisiqinisekiso somtshato
ubukhulu bomnyango wangaphakathi
izimvo zegrabile zegrabile
imibono yokujonga imiphezulu yeetafile